Shiinaha TPMS-2 Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Nasiib
100% Matoorka Shiinaha ee asalka ah...
MOQ hoose ee Shiinaha 60g Fe ad...
xoqitaanka Culayska Shaagaga
16 "RT-X40838 Birta W...
17 "RT Steel Wheel Se...
TPMS-2 Dareemka Cadaadiska Taayirka ee Xargaha Xargaha
Waalka taayirku waa qayb muhiim ah oo badbaado leh waxaana lagu taliyaa kaliya mashiinnada ilaha tayada la yaqaan.
Gawaarida tayadoodu hooseyso waxay sababi kartaa daadad dagdag ah oo taayirka ah iyadoo baabuurtu ay noqdaan kuwo aan la xakameyn karin oo ay suurtogal tahay inay shil galaan.Taasi waa sababta Fortune ay kaliya ka iibiso valves tayada OE oo leh aqoonsi ISO/TS16949.
Codsi fudud oo la jiidi karo
-Daxalka u adkaysta
-Waxyaabaha caagga ah ee EPDM oo tayo leh ayaa dammaanad qaadaya xoog jiid wanaagsan
-100% la tijaabiyay ka hor inta aan la dhoofin si loo hubiyo badbaadada alaabta, xasiloonida iyo adkeysiga;
Tixraaca Qaybta Number
xirmada dill: VS-65
T-10 Screw Torque: 12.5 inch lbs.(1.4 Nm) Loogu talagalay TRW Version 4
Waa maxay TPMS?
Habka xawaaraha dheereeya ee baabuurka, taayirrada taayirrada ayaa ah tan ugu welwelka badan oo ay adag tahay in laga hortago dhammaan darawallada, sidoo kale waa sababta ugu muhiimsan ee shilalka degdega ah ee gaadiidka.Marka loo eego tirakoobka, 70% ilaa 80% shilalka gaadiidka ee waddooyinka waaweyn waxaa sababa daloolno.Ka-hortagga daloolista waxay noqotay arrin muhiim u ah wadista badbaadada leh.Soo ifbaxa nidaamka TPMS waa mid ka mid ah xalalka ugu habboon.
TPMS waa soo gaabinta "Nidaamka Dabagalka Cadaadiska Taayirka" ee nidaamka la socodka wakhtiga dhabta ah ee cadaadiska taayirka baabuurta.Inta badan waxaa loo isticmaalaa in si toos ah loola socdo cadaadiska taayirka wakhtiga dhabta ah inta uu baabuurka wado, iyo in la ogeysiiyo daadinta taayirka iyo cadaadiska hawada oo hooseeya si loo hubiyo badbaadada darawalnimada.Nidaamka digniinta ugu horayso ee badbaadada darawalada iyo rakaabka.
Waa maxay TPMS valve?
Jirka waalka ayaa ugu dambeyntii ku xira dareemayaasha geesta.Valves waxaa laga yaabaa inay ka samaysan yihiin caag degdeg ah ama aluminium ku dhejisan.Si kastaba ha ahaatee, dhamaantood waxay u adeegaan isku ujeedo -- si loo ilaaliyo cadaadiska hawada ee taayirka.Jirka dhexdiisa, jirid naxaas ah ama aluminium ayaa lagu rakibi doonaa si loo xakameeyo socodka hawada.Waxa kale oo jiri doona weelal caag ah, laws aluminium ah iyo kuraas oo ku yaal jirida waalka-ku-qabsiga si loo xidho dareeraha si sax ah cidhifka.
Maxaad ugu baahan tahay inaad bedesho valve cinjirka TPMS?
Xirmooyinka caagga ah waxay la kulmaan xaalado cimilo oo kala duwan sanadka oo dhan, taas oo u horseedi karta gabow gaar ah waqti ka dib.Si loo xaqiijiyo badbaadada darawalnimada, gabowga tuubada tuubada tuubada waa in fiiro gaar ah loo yeesho.Waxaan ku talinaynaa in la beddelo waalka mar kasta oo taayirka la beddelo.
Hore: TPMS-1 Dareemka Cadaadiska Taayirka ee Xargaha Xargaha